Inverter yamandla, Isilawuli sokushaja Solar, Ukushintsha Ukunikezwa Kwamandla - Leyu
Ukunikezwa kwamandla we-NES Series Single Power Power
Thina Leyu yasungulwa ngo-2005, ikakhulukazi ukukhiqiza AC ukuze DC, DC ukuze DC usuke ugesi, off igridi uthayi eliphezulu kahle amandla inverter, solar icala isilawuli, uhlelo Ukuphenya futhi inkinobho rotary. Imikhiqizo ivunywa isitifiketi se-CE ROHS CCC. Ibhizinisi lethu livunyelwe yi-ISO9001. Ngokusekelwe enkolelweni yokuhweba "Gxila kumakhasimende", "ukubona ukwaneliseka kwamakhasimende" njengenhloso yethu yomsebenzi.
Uchungechunge lwe-350W Single Power switching Power Supply S-350
I-60W Yokukhipha Okukodwa Kwe-Industrial DIN Rail Power Supply DR-60 Series
75W Okukhipha Okukodwa kwe-UPS Function Power Supply SCP-75 Series
I-100W Ukukhishwa okukodwa Okushintshela Ukunikezwa Kwamandla LRS-100 Series
Xhumana nathi ukuthola amasampula amaningi
Ngokusho izidingo zakho, ngezifiso ngawe, futhi ukukunikeza isampula
Inkampani yakwaLeyu igxile ekwenzeni ukushintshwa kwamandla, i-inverter yamandla, isilawuli sokushaja elanga, uhlelo lokuskrola nokushintsha kwe-rotary iminyaka eminingi.
Imikhiqizo ivunyelwe isitifiketi se-CE \_ ROHS \_ CCC \_. Ibhizinisi lethu livunyelwe yi-ISO 9001.
Inkampani yethu manje inezintambo ezingaphezu kuka-60, onjiniyela abaphezulu aba-5, ukuthengisa ukuthekelisa okungu-10, umkhiqizi oqeqeshiwe wamukela ukwenza ngokwezifiso ne-OEM.
Iningi lemikhiqizo yethu ejwayelekile isesitokweni, singaletha zingakapheli izinsuku zomsebenzi ezi-2, imodeli ekhethekile idinga izinsuku zomsebenzi eziyi-7-15.Kuma-oda amaningi wobuningi amasonto ama-lead-time ayadingeka.
162018 / Januwari
Mthengi Othandekayo, Sikukhumbuza ukuthi amafemu amaningi eChina azoyeka ukusebenza phakathi noMkhosi Wentwasahlobo. Amaholide kaLeyu azoqala ngomhla ka-4 kuFebhuwari kuya kumhla ka-25, ngoFebhuwari ngo-2018. Ngokwethiyori, ama-oda amaningi aqinisekiswe ngaphambi komhlaka-20 Januwari, 2018 angathunyelwa ngaphambi kweholide. Kodwa-ke, konke ...
Isaziso Seholide Sentwasahlobo sango-2018
252018 / Januwari
2018 Qalisa Isikhathi Ngemuva Komkhosi Wentwasahlobo
Khasimende elithandekayo, Sinqume ukuqhubeka nomsebenzi ngemuva koMkhosi Omude Wentwasahlobo owawungoFebhuwari 27. Ngaleso sikhathi, ungazizwa ukhululekile ukuxhumana nathi mayelana nama-oda akho amasha. Ngoba amakhasimende amaningi abeke i-oda ngaphambi komkhosi, imboni yethu izobe imatasa kakhulu. Uma udinga ukunikezwa kwamandla, inverter yamandla njll, ...
Makhasimende amahle, ngemuva komkhosi wesikhathi eside waseNtwasahlobo, u-LEYU ubuyile uzosebenza namuhla (Febhuwari 27th). Yamukela imibuzo yakho mayelana nokunikezwa kwamandla, inverter yamandla njll. Imibuzo yakho izophendulwa kungakapheli amahora angu-12. Ngiyabonga. Ithimba lokuthengisa leLeyu
Dc Inkinobho Shintsha, Lw26gspad-Lock Uhlobo Shintsha, Ishaja Isilawuli Solar, Isilawuli sokushaja elanga esingu-60 amp, isilawuli seshaja yebhethri yelanga, I-Solar Power Converter,